सार्वजनिक स्थलमा के गर्न उचित हुन्छ, के हुँदैन भन्ने चलिएका मान्यता छन् मन लाग्यो भन्दैमा सभ्य व्यक्ति निर्वस्त्र भएर हिँड्दैन। बुझ्नेलाई यति नै काफी छ
Added by Kabita on February 28, 2011 at 5:40pm —2Comments
त्यो एकदिन from my blog www.tyamkeview.blogspot.com
खुला आकाश। जाडो छैन, गर्मि पनि हैन। जाडो सकिएर गर्मि शुरु हुने बेलाको अरु दिनजस्तै थियो त्यो दिन पनि। न चिसो न तातो नै। अघिल्लो रात वुटवलको बास, रातभरी राम्ररी निद्रा लागेन। त्यसैले त्यो दिन अर्थात फागुन १५ गते पौने आठ बज्दासम्म पनि ओछ्यान छोड्न मन लागेन। साल २०६५। ओछ्यानबाटै फोन गरे काठमाण्डौमा रहेका श्रीमती र छोरालाई। छोरो सुतिरहेको थियो, श्रीमतिसँग गफ भयो, नजिकिदैं थियो विवाहको सातौं बर्षगाँठ। अरु एकदुई जना साथीभाईलाई पनि फोन गरे। काठमाण्डौ हुँदा व्यस्तताले होला नभ्याइने त्यसैले त्यो दिन… बाँकी
Added by Binaya Shekhar on February 27, 2011 at 6:40pm —3Comments
आधुनिकीकरणसँगै मायाको बारेमा सोच पनि बदलिएको छ । जोसँग डेटिङ गयो उसँगै विवाह गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।अहिले कसैका लागि चिठी लेख्न फुर्सद छैन । फोनमा कुरा गर्नु पनि समयको बर्बादीभन्दा अरू केही होइन । आधुन…
आधुनिकीकरणसँगै मायाको बारेमा सोच पनि बदलिएको छ । जोसँग डेटिङ गयो उसँगै विवाह गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।अहिले कसैका लागि चिठी लेख्न फुर्सद छैन । फोनमा कुरा गर्नु पनि समयको बर्बादीभन्दा अरू केही होइन । आधुनिक पुस्ताका लागि यो सबै काम ख्याल-ठट्टाभन्दा अरू केही हुन सक्दैन । उनीहरूको माया मात्र शारीरिक सम्बन्धमा केन्दि्रत छ । उनीहरूको माया जुनी-जुनीको माया र समर्पणमा अटाएको छैन । इन्टरनेटको चक्रब्युहमा परेकाहरू हिजोआज फेसबुक र हाइफाइभमा आफ्नो माया व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूमा केही संकोच छैन, जसले…
Added by Kabita on February 25, 2011 at 11:37am —3Comments
हामी नेपालीले आफ्नो जीवनलाई महत्व दिन सकिरहेका छैनौं । हाम्रा धेरै कमजोरी छन् । ती कमजोरी अरू कसैको कारणले नभई आफ्नै कारणले सिर्जिएको हो । हाम्रो जीवन सम्पन्न र संस्कारबद्ध छ तर हामी आफै यसलाई महइभ्व…
हामी नेपालीले आफ्नो जीवनलाई महत्व दिन सकिरहेका छैनौं । हाम्रा धेरै कमजोरी छन् । ती कमजोरी अरू कसैको कारणले नभई आफ्नै कारणले सिर्जिएको हो । हाम्रो जीवन सम्पन्न र संस्कारबद्ध छ तर हामी आफै यसलाई महइभ्वहीन बनाइरहेका छौं । सुख र दुःख हरेक मानिसको जीवनमा आउ“छ । सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्छ । पढेर मात्र समाजलाई अग्रगतिमा लान्छु भन्ने हैन, जीवन यात्रामा लागि सकेपछि चुनौतिहरू थुप्रै आउ“छ ।‘यात्रा भित्र र बाहिर छ’ यात्रा रातो छ । कालो छ । अशुभ त्यत्तिकै छ । केही दर्दहरू छन् विषादहरू छन् कसैलाई हुन सक्ने…
Added by Kabita on February 24, 2011 at 11:20am — No Comments
डिप्रेशन मलाई भएको छैन भन्ने सोच्नुभएन
डिप्रेशन भनेको मानसिक रोग हो । भावनामा हुने गडबडीलाई इमोशन वा मुड डिसअर्डर भन्छौं । डिप्रेशन मुड डिसअर्डरकै एक प्रकार हो । हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा एकनाशको मुडमा हुन्छौं । जब केही कारणले तनाव, असफलता वा विछोड हुन्छ हामी निराश वा उदास हुन्छौं र हामी स्वभाविकभन्दा धेरै समयसम्म त्यही अवस्थामा रहन्छौं भने त्यो डिप्रेशन भएको मानिन्छ । कहिले काही निरासाको कारण स्वयं व्यक्तिलाई पनि थाहा नभएको हुन सक्छ । डिप्रेशनमा केही गर्न मन नहुने, जोश जा“गर, फूर्ति नहुने, केही गर्न खुशी…
Added by Kabita on February 24, 2011 at 11:17am — No Comments
- पवन न्यौपाने
यो लेखको म वा मेरो पात्रले समस्यामा परेका तिनै पुरुषहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्छ जो कोही पनि हुन सक्दछ । तर यो लेख कसैको ब्यक्तिगत जीवनप्रति ईंकित गर्न खोजिएको भने होईन ।
थाहा छैन कताबाट शुरु गरुँ यो लेख । बिषय गहन छ मेरो विचारमा । अधिकारबादी हरुको नजरमा वाइयात् लाग्न पनि सक्ला अहिले नै । तर लेख्नैपर्छ भन्ने कुरामा बल गर्ने सर्वोच्चको भर्खरै आएको एउटा फैसला 'केटीले बलात्कार गर्नै सक्दैनन्' लाई साधुवाद ।…
Added by pawan neupane on February 23, 2011 at 2:44pm —5Comments
I immediately took action and fought against the weeds with the strongest weed killer on the market. Instead of killing the weeds, my lawn began to die. I read the label and did everything…
Added by Rupen on February 23, 2011 at 10:07am — No Comments
विहानीको झिसमिसे अन्त्य हुन नपाउँदै आज दमौलीवासीले दुखद खबर सुन्नु र देख्नुपर्यो । विहानैपख एकाएक बजारका ४ जनामाथि खुर्पा प्रहार भएको घटना सुन्न नपाउँदै तीमध्ये ३ जनाको दुखद निधन भएपछि बजारवासी शोकाकुल हुन पुगे । विहान ७ बजेतिर दमौलीमा दुईजनामाथि खुर्पा प्रहार भएको खबर आयोखबर पाउनासाथ अस्पतालनजिकै भेला भएका बजारवासी दुवैको रगतपच्छे अवस्था देखॆपछि भावुक हुनु स्वभाविक पनि थियो । व्यास २ निवासी दिविङ रानाको खुर्पा प्रहारबाट चिन्ताजनक अवस्थाका घाईते व्यास १० विसघरे निवासी टिकाराम श्रेष्ठ र पार्वती… बाँकी
Added by pawan poudel on February 22, 2011 at 4:23pm — 1 Comment
"The Nepali government has formedafive-member commission to investigate into the air crash accident of Twin-otter of Yeti Airlines, in which 18 people were killed at Lukla Airport on Wednesday morning." www. news.xinhuanet.com
"At least 10 people were killed whenabus plunged fromanarrow mountain highway in western Nepal, police said Sunday. It fell nearly 800 metres intoanarrow gorge while negotiatingasharp bend in remote Baitadi district, about 500 kilometres west of…
Added by Gaurav Pokhrel on February 22, 2011 at 2:37pm — No Comments
जेठादाई!! जय मशिहा
बल्ल बल्ल देउरालीको स्कुलको ओरालो सकिएर स्वास्थ्य सम्बन्धी एक कार्यक्रमको सिलसिलामा ईपा गा“उ विकास समिति पुग्न थालेपछि दुई तीन जना महिलाहरुको समूह जय मशिहा भन्दै दुवै हात जोड्दै हाम्रो समूहको निर आईपुगे, हामीसंगै गएका पाश्चरबाले जय मशिहा भन्दै अभिवादन फर्काए र परमेश्वरले सबैलाई कल्यान गरुन भनेर आर्शिवाद पनि दिन भ्याए ।
कोगटे भन्दा अलिमाथि चमेलेमा हाम्रो गाडी राखेपछि हामी करीव दुईघण्टा माथि जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले बनाएको ट्रयाकको भग्नावशेषसंग पैठा जोरी… बाँकी
Added by sudhir bhadra on February 21, 2011 at 12:10pm — 1 Comment
बिग्रे बिग्रे सबै बिग्रे.... ७१ बर्षीय नागरिक पत्रकार सिताराम अधिकारीको अडियो विचार
Added by Mukunda Nepal on February 21, 2011 at 11:00am —3Comments
बोल्ड बनौं बोल्ड !!!
हिजो म अफिसबाट घर जाँदै थिएँ । एक्लै भएसम्म िहंड्नु मेरो रहर हो किनकी िहंड्दा देखिने धेरै कुराले केही सोच्ने परिस्थितिको सृजना गर्छन् र तिनले आफ्ना बुझाइहरुलाई माझ्दै र थप्दै जान्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो । हिजो पनि त्यो अवसरको भरपूर सदुपयोग गर्ने मनस्थितिका साथ नयाँबाटो हुँदै चक्रपथ ओर्लिएँ । देब्रेपट्टि गाडीका ताँती जाममा थिए यदि गाडी चढेकै भए पनि िहंड्दा भन्दा…
Added by Durga Lamichhane on February 18, 2011 at 5:27pm — 1 Comment
जलवायु अनुकूलन र जीविकोपार्जनमा सुधार
चितवन जिल्लाको राप्ती र नारायणी नदीकिनारका तीन गाउँमा सन् २००८ मा एक अध्ययन गरिएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुाजसँग जोडिएका मेघौली र पटिहानी गाविसका समुदायले भोग्दै आएका विभिन्न प्रकोपका घटना त्यसको कारण र त्यसबाट समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावका बारेमा गरिएको उक्त अध्ययनले यस क्षेत्रको तापक्रममा निरन्तर वृद्धि हुँदै…
Added by shiva gyawali Bankaila on February 18, 2011 at 2:06pm — No Comments
विवाह र समझदारी
विवाहलाई धेरैले सम्झौता मान्छन् । यथार्थमा विवाह बाध्यताको सम्झौता नभै समझदारीमा जीवन जिउने कला हो । शब्दको पछि नलागेर विवाहलाई सम्झौता नै मान्ने हो भने पनि 'सम्झौता' आफैमा नराम्रो हुँदैन । एक्लाएक्लै बाँचेका अधुरा दुई पक्ष एक भै पूर्णताको अभ्यासमा लागिपर्छन् भने त्यसमा नराम्रो के छ ? सबै काम, दायित्व र निर्णय हिजोसम्म एक्लाएक्लै गर्ने दुई पक्ष विवाहपछि आपसी सहमति, सल्लाह र समझदारीमा काम गर्छन् भने त्यसमा नराम्रो के भयो र ? विवाहपछि स्वतन्त्रता गुम्छ भनिन्छ । विवाहसँगै गुम्ने कुराको समीक्षा… बाँकी
Added by Kabita on February 18, 2011 at 11:06am — No Comments
श्री ५ नभएका ज्ञानेन्द्रहरु
लामो ईतिहास बोकेको राजतन्त्रले नारायणहिटीमा पहिलो तथा अन्तिम पत्रकार सम्मेलन गरी विदा वारी भएर गई सकेको छ । राजाले म सामान्य जनता भई भनेर भाषण गरी रहदा बाहिर रहेका माथिल्लो तहका सूरक्षा कर्मी आफ्ना सहयोगीहरुलाई राजर्षि ठाटमा हप्की दप्की गरेर नारायणहिटी बाहीर काममा लगाउ“दै थिए । पुर्खाले आर्जेको सम्पत्तिको भरमा राजा हुनेले त नरम चरित्र अपनाई विदाबारी भई रहेका थिए भने वरिष्ठ कामदारहरु कनिष्ठ कामदारहरुलाई उही पुरानै राजसी छा“ट दोहराईरहेका थिए ।
नारायणहिटी अगाडी देखिएको एक दिनको कुरा मात्र… बाँकी
Added by sudhir bhadra on February 17, 2011 at 12:52pm — 1 Comment
जुठेल्नामा बासिरहेको भाले रेडियोमा पो बास्यो
एकैछिन अगाडि जुठेल्नामा बासिरहेको भाले रेडियोमा पो बास्यो । आम्मै रेडियोमा कुखुरा बासेको? हसिलो मुहारमा स्वादीलो खाना पस्किने सबैकी दिदी छक्कै परिन् । रेडियोमा बिहान ५ बजेदेखि एकएक घण्टाको अन्तरमा भाले बास्न थालेको थियो । कतिपय ठाउँमा कुखुराको भालेलाई घडिचरो पनि भनिन्छ । यसैले रेडियो मकालु धनकुटाले पनि समय बताउन कुखुराको भाले प्रयोग गर्ने निधो गर्यो । यो भालेलाई अम्मर बनाईयो । सहकर्मी संचारकर्मी कुल प्रसाद राइले भने । उनको बिचार अबको खानामा भाले पनि काटौ र…
Added by Binaya Shekhar on February 17, 2011 at 7:11am — 1 Comment
सम्बन्धविच्छेदका हकमा नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार पुरुषमाथि अन्याय भएको हो त
नेपाली महिला आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूपमा पुरुषभन्दा पछाडि छन्। हिंसाबाट उनीहरू नै बढी पीडित छन्, सम्बन्धविच्छेद गरे पनि उनीहरू सम्पत्ति नपाएर पीडित छन्। समाजमा विधवाप्रति गरिने व्यवहार पनि राम्रो छैन। विवाहकै मामिलामा पनि महिलाको उमेर र पढाइ पुरुषको भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ, छोरा नपाए अर्की ल्याउने परम्परा अझ कायमै छ। लोग्ने छोडेकी महिला भन्नेबित्तिकै समाजको दृष्टिकोण फरक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी पुरुषलाई समान अधिकार दिन सकिएला ? समान अधिकार त त्यतिबेला दिनुपर्छ…
Added by Kabita on February 16, 2011 at 6:03pm — No Comments
L. Ron Hubbard, the founder of Scientology, wrote that “Tolerance is a…
Added by Rupen on February 15, 2011 at 11:15am — No Comments
Added by JAI PRAKASH POUDEL on February 15, 2011 at 9:01am — No Comments
Added by Punit Punya on February 14, 2011 at 7:37pm — No Comments